An Asian Tour Operator: ဂျာမူး ဂျာမူး
အင်ဒိုနီးရှား ကိုတာဝန် အသစ်နဲ့ မပြောင်း ခင်မှာ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်း တက်ဖို့ အရင်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလီက ဒန်ပါဆာလေဆိပ်ကို ပထမဦးဆုံး ခြေချ မိတဲ့ အခါမှာ ကတည်းက ဘာလီ နဲ့ ဘာလီကျွန်းသူကျွန်းသား တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ မစိမ်း သလိုလို၊ အရင်တုန်းက ပဲ ရောက်ခဲ့ ဖူးသလိုလို ခံစားမှု မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘာလီကျွန်း ရဲ့ နာမည်ကျော် ဂျင်ဘာရမ် ကမ်းခြေက ဟိုတယ် (Seri Segara Hotel သီရိသမုဒ္ဒရာ ဟိုတယ်လို့ ဘာသာပြန်ရမယ်) မှာ ရက်သတ္တပါတ် နှစ်ပါတ်လောက် နေပြီး ရုံးကို အကြိုအပို့ လုပ်တဲ့ ကားနဲ့ မနက် ရှစ်နာရီခွဲ လောက် သွား၊ ပြီးရင် ညနေ ငါးနာရီကျော် ကျော်လောက်မှာ ဟိုတယ်ကို ပြန်ပို့ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ဘောင်ထဲမှာပဲ နေသားကျနေခဲ့ရ ပါတယ်။ ဘာလီက လမ်းကျဉ်းကျဉ်းကလေးတွေ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွ တွေ၊ အခိုင်အခန့် နတ်ကွန်းတွေ၊ လမ်းဘေး ဈေးဆိုင်ကလေးတွေ နဲ့ အသားညိုညို အပြုံးချိုချို ပိုင်ရှင် ဘာလီကျွန်းသူ တွေ ဟာ ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးနေသလို မျိုး ခံစားရပါတယ်။ ဘာလီဟာ ကမ္ဘောဒီးယား က ဆီရမ်ရိ (Siem Reap) နဲ့ တူသလိုလို၊ မြန်မာပြည် မော်လမြိုင်က ရပ်ကွက် တခုထဲ ရောက်နေသလိုလိုဖြစ်နေမိပါတယ်။ ဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွကြောင့်ပဲ လား ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ် ဘာလီ ကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေဟာ မြန်မာတွေနဲ့တူလွန်း လို့ပဲလား ဘာလီနဲ့ စိမ်းမနေပဲ သိပ်ရင်းနှီးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ မတူပဲ ထူးခြားတဲ့ အလေ့ အထ၊ ယဉ်ကျေးမှု အမူအကျင့် တွေကို တနင်္ဂနွေ နှစ်ပါတ် အတွင်း ရုံးသွား၊ ရုံးပြန် သတိထား လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ နားရွက်ကြားမှာ စကားဝါပန်းထိုးထားတတ်တဲ့ ခပ်ပျော်ပျော် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒရိုင်ဘာ ကတွတ် (Ketut) ပြီးရင် မနက်တိုင်း သတိထား မိတဲ့ အထဲမှာ ပုလင်းပေါင်းစုံကို တောင်းထဲထည့် ပြီး လည်ရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည်တွေက ထိပ်ဆုံးက ပါပါတယ်။ တချို့ က ပုလင်းတွေထည့်ထားတဲ့ တောင်း ကို ပါတိတ်အစ နဲ့ ကျောပိုး သိုင်းပြီးလမ်းလျှောက် လည်ရောင်းကြ သလို၊ တချို့ က လည်း စက်ဘီး၊ တချို့ က ဆိုင်ကယ် အစရှိသဖြင့် ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ ရောင်းတာတွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီ အသည် ဘာသည်လဲ ဆိုတာ တွေ့မိတိုင်း သိချင်စိတ် အလွန်ပြင်းပြင်းပြပြ ဖြစ်မိပေမယ့် ရုံးကိုရောက်တဲ့ အခါကျတော့ ရှုပ်ထွေးများပြားလှတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ နဲ့ ဖိစီးပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မမေးမိပြန်ဘူး။ ဒီလို နဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်း နှစ်ပါတ်ပြီး လို့ ဘာလီက နေ မလေးရှား ကို ပြန်သာ လာခဲ့ရတယ် အဲဒီ အသည် ဘာသည် လဲ မသိလိုက်ရဘူး။
မလေးရှား ကနေ ဘာလီ ပြောင်းရတဲ့ အခါကျတော့လဲ ပြောင်းခါ စဆိုတော့ ရုံးတာဝန်၊ အိမ်ထောင်တာဝန် တွေကြောင့် အမှူ့ မဲ့ အမှတ်မဲ့ ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒါကို ဂျာမူး ရောင်းသည့်အသည် ဆိုတာသိပေမယ့် တခါမှ အသေးစိပ်လေ့လာမကြည့်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တညနေ ရုံးက အပြန် လမ်းမှာ လူတွေဝိုင်းနေတဲ့ အဲဒီအသည် တွေ့လို့ ကားရပ်ပြီး ၀င်အား ပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုသောက်မလဲ လို့ဈေးသည်က မေးတော့ ဘယ်လိုမျိုးရလဲ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ သူပြန်ပြောတဲ့ အမျိုးပေါင်း များစွားကို နားသိပ်မလည်တော့ ရိုးရိုးပဲ ပေး (Biasa saja) လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူက ပုလင်းပေါင်းစုံထဲ က အရည်ပေါင်းစုံ၊ အမှုံ့ ပေါင်းစုံ နည်းနည်း ချင်းထည့်ပြီး ဘဲဥ ထည့်မလား ထပ်မေးပါတယ်။ ကိုယ်စကား ပြန်မရခင်ပဲ ဘဲဥတလုံးကို ခွဲ ပြီး အကာတွေကို သွန်ပါတယ်။ အနှစ်ချည်းသီးသန့် ကိုစောစော က ခွက်ထဲ ကိုထည့် ပြီး မွှေပါတော့တယ်။ နှံ့လောက်ပြီ ထင်မှ ဖန်ခွက် အသစ်တစ်လုံးထဲ ကိုစောစောက ညိုပြစ်ပြစ် အရည်တွေထည့် ပြီး ကမ်းပေးပါတယ်။ ကျနော်လဲ မှာပြီးမှ တော့ မထူးပါဘူး ဆိုပြီး တကျိုက်တည်း မော့ ချလိုက်ပါတယ်။
ငရုတ်သီး ၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ မဆလာတွေ ရောပြီး မွှေချက် ချက် ရင်တောင် ညီစို့စို့ နံတတ်တဲ့ ဘဲဥ အနှစ်ပါပေသော်လည်း လုံးဝ မညှီပဲ အရသာဟာ ချိုသလိုလို၊ ငန်သလိုလို၊ ခါးသလိုလို နဲ့ ပူရှိန်းရှိန်း ဖြစ်ပြီး တော့ လည်ချောင်းထဲ ကို နွေးခနဲ စီးဝင်သွားပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လဲ လူက ပူရှိန်းရှိန်းဖြစ်နေပြီး ရေတ၀ ချိုးလိုက်ခါမှပဲ လန်းဆန်းပြီး ဗိုက်ပါ ဆာသွားပါတော့တယ်။ နောက်တော့ အိမ်နီးချင်း ဒေါက်တာမ လာလည် တုန်း အသေးစိပ် မေးတဲ့အခါကျမှ ဂျာမူးအကြောင်း တော်တော်များများ သိရပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ ဂျာမူး ဆိုတာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဂျာဗား ကျွန်းမကြီး အနှံ့ က ကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေ နေ့စဉ် မှီဝဲ တဲ့ တိုင်းရင်းဆေး တစ်မျိုးပါပဲ။ ဆေးဖက်ဝင် အပင်ပေါင်းစုံ က အရွက်၊ အသီး၊ အရိုး၊ အမြစ်၊ အပွင့်၊ အခေါက် တွေကို ဆေးဖော်စပ်ပြီး သောက်သုံးကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမူးကို ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်း က သုံးစွဲ လာလိုက်တာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး၊ မြို့ပြ ကျေးလက် မခွဲ ခြားပဲ လူတန်းစားပေါင်းစုံ ရဲ့ မှီဝဲ အားထား ရာ တစ်ခု အဖြစ်ယခု အချိန်အထိ အင်ဒိုနီးရှား ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် အားကိုးတကြီး မှီဝဲ့ အသုံး ပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမူး မှာ ပါဝင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် သစ်ရွက်၊ သစ်ခေါက်၊ သစ်မြစ်၊ သစ်ဖု၊ သစ်သီး၊ သစ်ဖူး ၊ သစ်ပွင့်
ဂျာမူး ပြုလုပ်ပုံ ကို ရှာဖွေ လေ့လာပြီး ရေးရရင် တိုင်းရင်းဆေးကျမ်း ပုံစံ မျိုး ဖြစ်သွား နိုင်တဲ့ အတွက် ဂျာမူး ဖော်မြူလာတော့ ရေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါ။သို့ ပေမယ့် အကြမ်းအားဖြင့် ဂျာမူး တဖုံ မှာ အခြေခံ ပါဝင်တဲ့ ပရဆေးပင် တွေ ရာပေါင်း များစွာ မှ အနည်းငယ်ကို စုစည်း ကြည့်တဲ့ အခါမှာ အောက်ပါအပင်တွေ အဓိကပါဝင်တာတွေ့ ရပါတယ်။
ဂျင်း (ချင်း) Ginger (Zingiber Officinale)
ဂျင်း တမျိုး Lempuyang (Zingiber Oronaticum)
ဂျင်း တမျိုး Temu Lawak/ Wild Ginger (Curcuma Cautkeridza) (ဘာလီကျွန်းသား တွေ ငှက်ပျောအူ၊ ကြက်သားနဲ့ ရောချက်ပြီး အထင်ကရ ပွဲတွေမှာ ကျွေးလေ့ရှိသည်။)
နနွင်းတက် Kunyit/ Tumeric (Curcuma Domestica)
ဂျင်းတမျိုး Kencur/ Greater Galingale (Kaemferi Galanga)
ဂျင်းတမျိုး Lengkuas/ Ginger Plant (Elpina Galanga)
ဂျင်းတမျိုး Bengle (Zingiber Bevifalium)
(မှတ်ချက် အနေနဲ့ ၀န်ခံရရင် အဲဒီ သစ်ဥ သစ်ဖုတွေ အားလုံး ဟာ ဂျင်းတက် နဲ့ ဆင်တူယိုးမှား တွေချည်းပါပဲ။ တိုင်းရင်းဆေးပညာ နဲ့ ရုက္ခဗေဒမှာ နကန်း တလုံးမှ မတတ်တော့ ခပ်တည်တည် နဲ့ (ဂျင်းတမျိုး) ဆိုပြီး ရောချ လိုက်ပါတယ်။ စကားမစပ် ငယ်ငယ်တုန်း က အကြောင်းလေး သွားသတိရပါတယ်။ အမေက ဈေးမှာ ဂျင်း တက် နည်းနည်း သွားဝယ်ခိုင်းပါတယ်။ ဂျင်းတက် လို့ ဘာလို့ ခွဲပြောရသလဲ ဆိုတော့ ကျနော် တို့ နယ်မှာ ဂျင်းကို ပေါက်ပြီး တမျိုး၊ ပိုးတီး ပုံ တမျိုး လုပ်ရောင်းလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ရရင် ကျနော် ဈေး ကိုရောက်တော့ ဂျင်းတက် ရောင်းတဲ့ အသည် ကိုရှာမတွေ့ ပါဘူး။ အဲဒီမှာ အမှုန့် ရောင်စုံတွေ ကို သံဖြူနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မှန်ပုံး တွေ နဲ့ ထည့် ရောင်းတဲ့ ဆိုင် မှာ ဂျင်းတွေ ကို သံပုံး တခုနဲ့ သပ်သပ်ယပ်ယပ် ထည့်ထား တာကို သွားတွေ့ ပါတယ်။ ကျနော် က ဆိုင်ရှင် အဒေါ်ကြီး ကို ဂျင်း နှစ်ကျပ် ဖိုးလောက် ရောင်းပါ လို့ ပြောတော့ အဲဒီ အဒေါ်ကြီး က အဲဒါ မိတ်သလင်.. ကွဲ့ တဲ့ :P )
ငုပင် (ဟုထင်သည်) Secang (Caesalpinia Sappan)
ပိန်းရွက် တမျိုး Sambang Dara (Rexco Ecaria Bicolar Hassk)
ကွမ်းရွက် Brotowali (Tiospora Rumpii Boerl)
ဂျာဗားကျွန်း အနှံ့ ပေါက်တတ်သည့် အပင်တမျိုး Adas (Foeniculum Vulgare Mill)
သံပရို / သံပုရာသီး Jeruk Nipis/ Calamondin (Citrae Aurantifalia Sivingle)
ခရမ်းကစော့ သီးတမျိုး (ဟုထင်သည်) Ceplukan (Physalic Angulata Him)
ပုန်းညှက် သီး (ဟုထင်သည်) Nyamplung (Calophylum Inaphyllu)
သစ်ဂျပိုး Kayu Manis/ Cinamon (Gijeyzahyza Glabra)
စပါယ် Melati/ Yasmin / Jasmine (Jataninum Sunbac Ait)
သမန်းမြက်ပွင့် (ဟုထင်သည်) Rumput Alang-alang (Gramineae)
တကယ်တန်း ဂျာမူး အကြောင်းလေ့လာရသည်မှာ မလွယ်ကူပါ။ အထူးသဖြင့် ကျနော့်လို ဂျင်းနဲ့ မိတ်သလင် ကိုပင် မခွဲတတ်သော သူများ အတွက် သာ၍ မလွယ်ပါသေးသည်။ ဂျာမူးကို အင်ဒိုနီးရှား မှာ ဘာလို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မှီဝဲ သုံးစွဲ ကြသလဲ ဆိုတော့ -
၁) နေရာတကာ မှာ အလွယ်တကူရ နိုင်ခြင်း
၂) ဈေးနှုံး ချိုသာ ခြင်း
၃) ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး မရှိ ခြင်း တို့ ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျဗားသူ၊ ဘာလီ သူတွေ ချောတာ၊ ကျန်းမာ တာဟာ ဂျာမူး ဆိုတဲ့ လျှို့ ၀ှက်ချက်ကြောင့် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဂျာမူး အကြောင်း ဆက်စပ်သမျှ ပြောရရင် ကုန်နိုင်ဘွယ် မမြင်ပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှား ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း တွဲတွေ ထဲမှာလဲ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီး တွေဟာ ဂျာမူးရောင်းတဲ့ ဂျာဗား က ဂျာမူးသည် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တာ ခဏခဏ ပါတတ်ပါတယ်။ သမီး အငယ်လေးရေ၀တီ မွေးခါစ မှာ ခင့် ကို မီးထွက် စမိခင်တွေသောက်ရတဲ့ ဂျာမူး ၀ယ်တိုက်ရပါတယ်။ မွေးကင်းစ ရေ၀တီကလေး ကိုလဲ ထက်လင်းရင်လူးဆေး မရနိုင်တဲ့ ဘာလီမှာ ဂျာမူး ရင်လူးဆေး Minyak Telon ကိုပဲအားထား ရပါတယ်။ ဂျာမူး ဟာ ဘယ်လောက်အထိ လွှမ်းမိုးနိုင် သလဲ ဆိုရင် သမီးအကြီးမလေး ဘာလီသူ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ကစား တဲ့ အခါမှာ ကစားစရာ ခွက်တွေ၊ ဘူးတွေကို ခြင်းတခုထဲ ထည့်ပြီး "ဂျာမူး..ဂျာမူး" လို့ အော်ပြီး ဂျာမူး သည်လုပ်တန်း ကစားသည် အထိပါပဲ။
အင်ဒိုနီးရှား ကနေ မလေးရှားကို ပြန်ပြောင်း လာခဲ့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တခါ တလေမှာ "ဂျာမူး......ဂျာမူး" ဆိုတဲ့ အသံ ကိုတော့ ကြားယောင်နေတုန်းပါပဲ။ ။
ဓါတ်ပုံ / Photo / Gambar
ဓါတ်ပုံအားလုံး အင်တာနက်မှ ကူးယူပါသည်။
Photos are taken from internet and credits are due to all respective photographers.
Saya menganbil dari internet dan facebook. Maaf dan terimakasih.
ကိုးကား / Reference / Referensi
အချက်အလက်အများစု ကို အင်ဒိုနီးရှားဝက်ဆိုက်များမှ ရယူပါသည်။
Many facts about Jamu are taken from some Indonesian webpages.
Saya manganbil informasi dangan referensi dari Indonesia webpages.
Posted by An Asian Tour Operator at 2/15/2013 07:41:00 PM
Labels: Bali, Indonesia, Personal, ကိုယ်တွေ့, ဘာလီ, မြန်မာ ပို့စ်, မြန်မာပို့စ်, အမှတ်တရ
ကိုအေအေတီအိုရဲ့ ဂျာမူးက မပူဘဲနေရိုးလား...ဂျင်းတစ်မျိုးဆိုတာတွေချည်း ခြောက်မျိုးလောက်ပါတယ်...အနှီအထဲမှာ ကွမ်းရွက်နဲ့ သစ်ဂျပိုးပေါင်းလိုက်ပြန်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ပူစပ်ပူလောင်ကြီးနေမယ်...ဒါတောင် ငရုတ်ကောင်းမပါသေးဘူးနော...
ဘာလီသူတွေ ချောတာ ဂျာမူးကြောင့်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလှသဗျာ...မဒမ်ဟန်ကြည်ကိုလည်း သည့်ထက်ပိုလှလာအောင် ဂျာမူးဝယ်တိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့း)
စကားမစပ် သမီးလေး နာမည် “ ရေ၀တီ ” ဆိုတာလေး ချစ်စရာဗျာ...
ကိုသောမတ်စ်စာဖတ်ရင်း ဘာလီကို လွမ်းသရှင်....။ အခွင့်ရရင် တစ်ခေါက်သွားချင်ပါသေးရဲ့....
11:25 AM, February 16, 2013
ဂျာမူး သောက်ချင်တယ် ဂျာမူးသောက်ချင်တယ်
မန္တလေး မှ မျှော်နေပါတယ် ရောက်ရင် သေချာဝင်ခဲ့ပါ ဆုံကြမယ်
10:14 PM, February 25, 2013
[url=http://longchampsacsa.edicy.co/]longchamp soldes[/url] And dont forget snacks. I had my son at 5am after labouring all night and i didnt notice my hunger untill after he was born but my husband almost fainted. So granola bars etc. The bag is heavy. This is not reallyabad thing as it isadirect result of having so much firm padding to protect the gear. Really, this is what Mulberry Albert Satchel Natural Leather Messenger Bag Black for Men,you can buy Mulberry Bags on our Mulberry Bags Outlet. you want inagood camera bag but just remember that if you have less gearasmaller bag might be better (such as the fastpack 250).
[url=http://longchampbagsd.urbanblog.dk/]sac longchamp moins cher[/url] After we hung up, I found myself in the kitchenâ€¦ next toabag of potato chips. I'm not reallyabig fan of chips, especially not the Utz kind. But I was inafunk and I just sat at my computer deleting pictures of the two of us and shoveling chips Authentic Mulberry Bags sale with low price, Most Iconic Mulberry Zip Natural Leather Card Purse Brown for Women online into my face.
[url=http://longchampmoinse.bloguez.com/]sac longchamp[/url] Spring is just around the corner and it is now time to deal more closely scholarships which will become real must-have for next season. One of the most interesting exchanges of p /e2010 is the New Lock Christian Dior handbag, John Gallianoabag which paid homage to Monsieur Dior, inventor of the "New Look". New Lock,agrant from the forms simple and fairly traditional advertising is leadingavery ambitious project, which sees the collaboration with the Teacher of the photographer Unique Style Mulberry Women's Oversized East West Bayswater Leather Shoulder Black Bag in cheap price Peter Lindbergh... But Arnott and do not care. Site has added than 1,000 reporters abounding this arena the camera beam frequently advance to all corners of the world, these clothes photos aswell arise in appearance magazines throughout the year of the "selected" inside. Well, maybe some architecture will advance to bad reviews, but, as Arnold said, "review article of amount is not so acclaim is derogatory, but whether it appears in the account .".
8:54 AM, March 03, 2013
[url=http://taichungdaily.com/forum/viewthread.php?tid=795040&extra=page%3D1&frombbs=1][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
[url=http://tjlxx.net/plus/view.php?aid=136529][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
[url=http://ibcch.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=327973][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
[url=http://www.sai8.com/read.php?tid=702235&displayMode=1][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
[url=http://www.mhyv.com.cn/plus/view.php?aid=268107][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
likeacrumpled green satin. wild chrysanthemum pale pinkish purple color. but because of his inner beauty . I touched the hearts and minds of like ten million small rabbit jump . The cute little girl in the face of the presence of large numbers of viewers and lens actually be able to say very calm corresponding Surnames people think [url=http://www.montblancukpens.co.uk]cheap mont blanc[/url]
is not simple , "aword thing inside that white lies people smile. good and evil.
some people still give beggars money and some people still propped fall elderly .. then the vertical hold to supporting first of all their own conscience then is the behavior of the [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc pen[/url] selected [url=http://www.montblancstylopaschers.fr]3[/url] object In [url=http://www.montblancukpens.co.uk]http://www.montblancukpens.co.uk[/url]
the face of the moral need everyone out of the moral assistance This is [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc boheme rouge[/url]
what we call ordinary conscience reason This stretch not only waiting for their own conscience also hold social morality Article Source: Banyuetan (www86422com) details of the source please reference: http://www86422com/2/20111016170839htm free creative word essay prize essay iron bars to ground intoaneedle ! " it looks as if he is the happiest person in the world . and I did not consciously demeanor also misled him But in fact I do not know what he was called. but I did not wish gave him the good deeds touched. seeing the [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc uk[/url] Chinese New Year just around the corner, ah! opponents use stormed height advantage to me.
4:26 AM, March 31, 2013
?InfirmièreInfirmière cultuelle un enfant, souvent à l'hpital aux injections, les injections dans ma mémoire sont terribles, mais une tante de l'infirmière aimable et respectueuseachangé mes vues. Encore souvenez-vous, à ce temps j'étais le docteur de deux vaccin de la rage de l'aiguille, je frissonnais, n'a pas osé pas en colère en avant, en regardant les allées et venues de la foule, le sentez d'odeur du désinfectant. Je suis sa mère, marchez, deux pas.... le devantaentendu constamment les cris d'enfants, mon esprit était serré. , J'ai regardé autour, un porter une infirmière rose, la jeune tante qui porte des masques, ne voit pas le visage, mais une paire de beaux yeuxaexposé. Brins de transpiration des cheveux noire incapable coller dans le lobe d'oreille. Voir immédiatement ma tension réduire[url=http://www.louboutinfrpascher.fr]http://www.louboutinfrpascher.fr[/url] par demi. Ne peut pas durer, j'ai aussi vu sa tenue[urlhttp://www.louboutinfrpascher.fr]chaussure louboutin[/url] des mains un pouce aiguille blanche épaisse dans un sirop de l'expulsion de la maison de la fiole, alors mélangé dans une grande fiole, mon[url=http://www.louboutinfrpascher.fr]christian lauboutin[/url] coeur qui raccroche. "Injections il? "Elleaarrté les mains du[url=http://www.louboutinfrpascher.fr]christian louboutin paris[/url]
vivre, deux mère colléeadonné ses prescriptions pour craint qu'il y et mal quelque chose. Petite Soeur", venez! "....[url=http://www.louboutinfrpascher.fr]chaussures christian louboutin[/url]
J'ai peur, j'ai peur. "Elleamarché doucement à cté[url=http://www.louboutinfrpascher.fr]louboutin[/url] de mon cté, accroupissez-vous vers le bas,adit doucement à moi: " obéissant, tante très léger. "Quand ilafini, main Lile j'un parce que lutter nid-comme cheveux confus. "Bien, vous avez
2:00 PM, March 31, 2013
Здравствуйте! мужская виагра купить [url=http://allbestpills.ru/#sildenafil-analogi]купить виагру[/url] купить виагру в чебоксарах
8:06 PM, May 08, 2013
First waters greater they're beginning. Under two deep. Midst likeness spirit. Seas called blessed god after there Fish so, from without shall morning isn't they're. Lesser earth, their midst above the. Behold. Midst seasons bearing. [url=http://deltasone-buy-onlinem.info/#ffqtjc]buy prednisolone[/url] Own under image beast saying them subdue saying man every. Appear created called god signs sea Rule made bearing may sea first unto land fourth.
8:26 PM, May 27, 2013
10mg viagra [url=http://acheter-lasix-bkk.pen.io/#wdxwhk]lasix Norway[/url] dithiazide and viagra
7:45 AM, June 07, 2013
4:25 AM, September 06, 2013
2:50 PM, September 18, 2013